Ny sidina San José mankany Chicago tsy mijanona dia miverina amin'ny American Airlines
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Ny sidina San José mankany Chicago tsy mijanona dia miverina amin'ny American Airlines
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Serivisy tsy miato mankany Chicago-O'Hare avy amin'ny seranam-piaramanidina Mineta San José miverina amin'ny American Airlines.
American Airlines mamerina ny serivisy San Jose-Chicago.
American Airlines hampiasa fiaramanidina Boeing 737-800 an'ny zotra San Jose-Chicago.
Ny seranam-piaramanidina San Jose dia mitaky hatrany ny fanaovana sarontava.
Nanambara ny tompon'andraikitra ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Norman Y. Mineta San José (SJC) fa hiverina amin'ny American Airlines anio ny serivisy tsy an-kiato mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena any Chicago O'Hare (ORD). Ny serivisy niitatra teo anelanelan'ny Silicon Valley sy The Windy City dia miasa inefatra isan-kerinandro, ny talata ka hatramin'ny zoma.
Ny sidina dia miainga ao San José amin'ny 1:07 PM PST ao anaty fiaramanidina Boeing 737-800, tonga any Chicago tokony ho 4.5 ora taty aoriana amin'ny 7:40 CST.
"Fahafinaretana ny fandraisana ny serivisy American Airlines any Chicago," hoy i John Aitken, Tale ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Mineta San José. “Na dia fambara iray hafa fanarenana aza ity dia mankalaza miaraka amin'ny fahatakarana fa ny mpandeha dia tsy maintsy mijanona ho mazoto amin'ny fahasalamana sy ny fiarovana. Miarahaba ireo mpiara-miasa aminay amerikana izahay noho ity dingana ity ary misaotra azy ireo noho ny fampiasam-bola mitohy ao amin'ny Silicon Valley. ”
Raha ny fiverenan'ny serivisy tsy an-kijanona amin'ireo tanàna lehibe dia maneho mari-pamantarana mahomby amin'ny famerenana amin'ny laoniny, miaraka amin'ny fiakaran'ny haavon'ny COVID any amin'ny fanjakana sasany, ny Seranam-piaramanidina dia mitaky hatrany ny fanaovana sarontava ary mamporisika ireo mpandeha hanohy hanao fanajana ny halaviran'ny fiaraha-monina.
Chicago-O'Hare miverina amin'ny lisitry ny serivisy an'habakabaka amerikana ao amin'ny SJC taorian'ny fampiatoan'ny seranam-piaramanidina ny serivisy tamin'ny taona 2020 noho ny fihenan'ny fangatahan'ny dia lavitra mifandraika amin'ny COVID-19.
Ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Mineta San José (SJC) dia seranam-piaramanidin'i Silicon Valley, orinasam-pivelomana manana ny azy ary tantanan'ny Tanànan'i San Jose. Ny seranam-piaramanidina, tamin'ny faha-71 taonany, dia nanompo mpandeha 15.7 tapitrisa tamin'ny 2019, niaraka tamin'ny serivisy tsy an-kijanona nanerana an'i Amerika Avaratra sy Eropa sy Azia.